Torohevitra sy fitsipika mivoaka amin'ny e-visa Indiana
Araka ny lalàna napetraky ny Manampahefana misahana ny fifindra-monina Indiana ho an'ny e-Visa Indiana na Visa India Elektronika dia avelanao hiala eto India amin'ny e-Visa ianao izao amin'ny rivotra, amin'ny lamasinina, amin'ny bus na amin'ny sambo fitsangantsanganana, raha nangataka ianao Ilay e-Visa mpizahatany ho any India or Business e-Visa ho an'i India or E-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India. Azonao atao ny miala an'i India amin'ny alàlan'ny 1 amin'ireto voalaza etsy ambany ireto seranam-piaramanidina na seranana.
Raha manana visa fidirana marobe ianao dia avela hivoaka amin'ny seranam-piaramanidina na seranan-tsambo samihafa. Tsy mila mivoaka amin'ny fivoahana na fidirana mitovy ianao amin'ny fitsidihana manaraka.
Ny lisitr'ireo seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo dia havaozina isaky ny volana vitsivitsy, koa avereno jerena hatrany ity lisitra ity amin'ity tranonkala ity sy tsorataho izany.
Hamboarina ity lisitra ity ary hisy seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo marobe hanampy amin'ny volana ho avy araka ny baikon'ny Indiana Immigration Authority.
Tsindrio eto raha hijery eto ny lisitra feno an'ny seranam-piaramanidina fidirana sy seranan-tsambo fidirana avela izany amin'ny e-Visa Indiana (India Visa Online).